Ndisilele kwi-Case yaseNew Jersey yokuTyhilwa. Ngoku kuthweni? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Ndisilele kwi-Case yaseNew Jersey yokuTyhilwa. Ngoku kuthweni?
Matshi 21, 2016 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Isaziso sokubonakala1 CommentAndres Cardenas
Isaziso esitsha saseJersey seNkangeleko kunye nokuTshintshwa kwiMeko yoBume beNew Jersey
Uye waxelelwa ukuba ukuyo Engagqibekanga kwityala lakho leNtsholongwane eNtsha lokuTyhilwa.
Ke, usenokuba uyazibuza ukuba kwenzeka njani oku, kwaye kuthetha ntoni kuwe. Ukuba umbolekisi obolekayo aka faki mpendulo ngefayile ye- $ 175 yokugcwalisa ngaphakathi kweentsuku ze-35, umbolekisi unokufuna ukulisusa iqela. Kwiimeko zokuchazwa kwangaphambili kweNew Jersey, ibhanki inokufuna ukusilela kommangalelwa ngokungenisa isicelo esisesikweni kunobhala wenkundla yokungena. Kufuneka ibenenkcukacha zokuba umtyholwa usebenze njani. Esi sicelo kufuneka senziwe ngaphakathi kweenyanga ze-6, okanye intshukumo iya kufuneka. Iziphumo zokungaphumeleli kunokuba kuhle ngokubolekayo.
Ndingayilungisa njani imeko yam eNgxilisayo yaseNew York?
Ekuphela kwendlela yokulungisa okanye yokulungisa okungagqibekanga kuya kuba kukungenisa ifayile intshukumo yokuphuma kufuna oko ngokubanzi,
1. Ukuba bekukho isizathu esihle, kwaye;
2. Ukuba kukho ukhuselo olufanelekileyo ngokuchasene nesenzo sangaphambili.
Iinkundla ziye zagweba ngokukhululekileyo abo baTyholwa, kodwa; kufuneka kwenziwe umzamo omkhulu phambi kwenkundla ukubonisa ukuba kutheni umbolekisi engazange aphendule kwangexesha ngokuchasene nesityholo sokuxelwa kwangaphambili se-NJ.
Ngaba kufuneka ndicamngce ngokubonisa kwam i-NJ?
Yintoni iSaziso sokubonakala kweNew York?
Ukuba kungenisiwe into engagqibekanga, kwaye umntu engabonisi sizathu esihle okanye ukuzikhusela, kuya kuba bubulumko ukuthetha negqwetha elivelelayo leNew Jersey malunga nokungenisa isaziso. Olu xwebhu lwezomthetho lunyanzelisa ukuba onke amaxwebhu anikezwe embuthweni, nangona umntu lowo engakhange afake sicelo sasemthethweni. Isibonelelo sokugcwalisa imbonakalo ngumbolekisi unelungelo lokufumana nawaphi na amaxwebhu ngokubhekisele kwisicelo sokugqibela. Ukuba isaziso asinikiwanga, isicelo singenziwa kumgwebi ukuba asibekele umgwebo. Ngapha koko, xa intengiso icwangcisiwe, umbolekisi obolekayo kufuneka afumane naziphi na izaziso ezifunwa yimithetho yenkundla.
Nokuba awukhange ufayile mpendulo ngexesha, kusekho izinto ezinokwenziwa Zikhusele ekubonakaleni. Usenokwazi ukufaka ifayile kwisindululo sokushiya okungagqibekanga okanye ufake isaziso senkangeleko. Kukho ezinye iindlela zokhetho. Kuxhomekeka ekubeni kuqhubeke ithuba elingakanani kwaye iinyani ezithile zetyala lakho, iindlela zinokubakho. Thetha nomnye wabameli bethu bembonakalo ePatel Soltis naseCardenas namhlanje ukubona ukuba yintoni kanye kanye enokwenziwa kuwe. Iiofisi zethu zibekwe kwi574 Newark Ave., Ste 307., IJersey City, NJ 07306.
Le bhlog ayenzelwe njengengcebiso yezomthetho kwaye akufuneki uxhomekeke kuyo. Kufuneka unxibelelane negqwetha ukuze ufumane ingcebiso malunga nenyani yetyala lakho.
Epreli 17, 2016 kwi-6: 12 pm
Molo indawo yewebhu epholileyo kakhulu !!